तानाशाह किम जोङ उनको लेदरको जकेटको किन चर्चा हुँदैछ विश्वमा ? – List Khabar
Home / समाचार / तानाशाह किम जोङ उनको लेदरको जकेटको किन चर्चा हुँदैछ विश्वमा ?
admin November 26, 2021 समाचार Leaveacomment 84 Views
एजेन्सी, प्योङयाङ : उत्तर कोरियाले सर्वसाधारणलाई लेदरको कोट लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । उत्तर कोरियाका तानाशाह किम जोङ उनको मुख्य रोजाइ रहेकोले सर्वसाधारणलाई कोट लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
Previous विहानै भुकम्पको धक्काले सर्वसाधारण डराए, घरवाट निस्किए सडकमा
Next सागर र प्रिज्माको ‘ब्रेकअप’ !